Koox hubeysan oo Muqdisho ku toogatay 4-Ruux. – Banaadir Times
By banaadir 28th December 2020 81 No comment
Degmada Xamarjajab gaar ahaan Buundada waxaa maanta lagu dilay 4-ruux oo dhalinyaro ah kana mid ah Dhalinyarada loo yaqaan Dhar cadda ee hoostaga Hay’adda Nabadsugidda Soomaaliya sida Mustaqbal ay u xaqiijiyeen saraakiil & ilo kala duwan.
Kooxda dilka geysatay ayaa goobta isaga baxsatay, waxaana kadib goobta tagay Ciidamada ammaanka oo sameeyay Baaris ay ku raadinayaan dadka ka dabmeeyay dilkaas oo baxsatay kahor inta aysan Buundadu tagin.
Magaalada Muqdisho waxaa maalmahaan kusoo kordhay dilalka ay geysanayaan Kooxaha hubeysan, inkasta oo aysan ka hadlin laamaha ammaanka Dowladda Federaalka falalkaan & natiijada kasoo baxda howlgalka Askarta toogashada kadib.
Maalin kahor Muqdisho waxaa lagu dilay labo Oday dhaqameen oo kamid ahaa Ergada soo dooratay Xildhibaannada Golaha Shacabka BFS, mas’uuliyadda dilkaas waxaa sheegatay Al-Shabaab.
Jimcihii Muqdisho gaar ahaan Xaafadda Nasteexo Degmada Wadajir Koox hubeysan waxa ay toogatay Cabdi Ganey oo kamid ah Dhalinyarada Xaafaddaas, waana baxsatay kooxda toogasho kadib.
Muddo 4-Cishe ah waxaa Caasimadda gaar ahaan Degmooyinka Wadajir, Dayniile, Hiliwaa & Xamarjajab lagu dilay 7-ruux oo kala ah labo Oday dhaqameed & Shanta qof oo Dhalinyaro ah.